डा. गोविन्द केसीको अनसनले उब्जाएका केही प्रश्न तथा पाठहरु - Enepalese.com
डा. गोविन्द केसीको अनसनले उब्जाएका केही प्रश्न तथा पाठहरु
इनेप्लिज २०७१ चैत १४ गते १७:१७ मा प्रकाशित
‘मेरो ज्यान गए पनि मलाई कुनै पर्वाह छैन । आफ्नो ज्यानभन्दा ३ करोड नेपालीको स्वास्थ्य जोगाउनु मेरा लागि ठूलो कुरो हो।’ यी निष्ठापूर्ण भनाइ पाँचौ पटक आमरण अनसनरत डा. गोबिन्द केसीका हुन् l पाँच दशक निष्ठाको राजनीति गर्ने प्र.म. कोइराला किन बिबश छन् सभासदहरुको दबाब सामु घुँडा टेक्न?उनको कुर्सी जोगाउनको लागि ?
महाभारतमा ध्रितराष्ट्र असफल हुनुको प्रमुख कारण “राम्रा” छोडेर “हाम्रा” प्रति उनको आसक्ति बढ्नु र “समता” छोडेर “ममता” लाई अपनाउनुले हो l